October 11, 2021 - kapurionline
३ सय ५० मेट्रीक टन भण्डारण क्षमताको कोल्ड स्टोर सन्चालनमा, साम्सद केसी द्वारा समुद्घाटन ।
Posted on October 11, 2021 by कपुरी अनलाइन
कमल बिष्ट , कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ६ गडगडवामा कोल्ड स्टोर सन्चालनमा आएको छ, लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयको ५० प्रतिशत अनुदानमा कुल २ करोड ६० लाख लागतको गुमानसिङ्ग कोल्ड स्टिरेज प्रालिको आज लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले समुद्घाटन गर्नुभएको हो ।
यस क्षेत्रमा कोल्ड स्टोरको आभावमा कृषकले धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने समस्या लाई ध्यान दिदै २ वर्ष अघि नै प्रदेश सरकारले गुमानसिङ कोल्ड स्टोरेज प्रालि लाई अनुदान सुनिश्चित गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले बताउनुभयो ।
कोल्ड स्टोर सन्चालनमा आए सङ्गै यस क्षेत्रका कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी फलफुल उत्पादन गरेर आफुलाइ अनुकुल समयमा बिक्री बितरण गर्न सक्ने छन भने उत्पादन समयमै बिक्री नभएर कुहिदा ब्यहोनुपर्ने आर्थिक नोक्सानी बाट पनि उत्पादक कृषकले राहत पाउने उहाले बताउनुभयो ।
कुल ३ सय ५० मेट्रीक टन भण्डारण क्षमता भएको कोल्ड स्टोरमा यस क्षेत्रका कृषकले सर्वसुलभ शुल्कमा आफ्ना उत्पादन चिस्यानका लागि भण्डारण गर्न सक्ने गुमानसिङ कोल्ड स्टोरेज प्रालिका सन्चालक अच्युत टण्डनले बताउनुभयो ।
Posted in समाचार, स्थानीयLeaveaComment on ३ सय ५० मेट्रीक टन भण्डारण क्षमताको कोल्ड स्टोर सन्चालनमा, साम्सद केसी द्वारा समुद्घाटन ।
चाडवाडको पुर्व शन्ध्यामा एमाले वडा कमिटी द्वारा शुभकामना आदान प्रदान
केशव बेल्वासे, कपिलवस्तु । नेपाल कम्युनिस्ट पाटी नेकपा एमाले शिवराज ५ नम्बर वडा कमिटी द्वारा चाडवाडको पुर्व शन्ध्याम शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आउदै गरेका नेपालीहरुका महान चाड बडा दशै दिपावली तथा छठ पर्वको पुर्व शन्ध्यामा चेम्वर अफ कमर्श कपिलवस्तुको हलमा वडा कमिटिले शुधकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । नेकपा एमाले शिवराज ५ नम्बर वडा कमिटी अध्यक्ष सरद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख खतिथि नेकपा एमाले कपिलवस्तु जिल्ला सचिवालय सदस्य चन्द्र बहादुर गहताजले हिन्दुहरुको महान चाड बडा दशैं,तिहार, नेपाल संवत एवं छठ पर्वको अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिदै सबै अब एकजुट भएर एमालेलाई देशमै शर्व श्रेष्ठ पाटि बनाउन लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो । अब लगत्तै एमालेको महाधिबेशन हुन गईरहेको हुदा सक्षम र सबल नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले शिवराज ५ नम्बर वडा कमिटी अध्यक्ष सरद अधिकारीले यस्तो खालको कार्यक्रमको आयोजनाले सबैमा एकता र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुने बताउनुभयो । नेकपा एमाले कपिलवस्तु जिल्ला कमिटि सदस्य तथा लुम्विनी प्रदेश सांसद अर्जुन कुमार के सी ले यस्ता पर्वले सबैमा भाइचार र सदभावको विकास होस भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभयो । चाडवाड मनाउदा पुरानो संस्कृतिलाइ बचाउँदै धेरुे तडक भडक नर्गन पनि उहाले आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि सदस्य तथा शिवराज नगर उप प्रमुख शिवकुमारी थारुले शिवराज नगरमा धेरै विकाशका कामहरु भएको बताउर्दै नगरको विकाशमा आफु खटिएइको पनि बताउनु भयो । साथै चाड पर्वले जातिय वर्गिय र सामुदायिक एकता कायम गरोस भनि शुभकामना राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेताहरु र नेकपा माववदि शिवराज वडा नं ५ कमिटि अध्यक्ष शिशिर पोख्रेल लगायतले हिन्दुहरुको महान चाड बडा दशैं,तिहार, नेपाल संवत एवं छठ पर्वको अवसरमा सबैलाई शुभकामना ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।
Posted in राजनिति, समाचारLeaveaComment on चाडवाडको पुर्व शन्ध्यामा एमाले वडा कमिटी द्वारा शुभकामना आदान प्रदान
प्रेस चौतारीको जिल्ला भेला सम्पन्न, क्रियाशिल पत्रकारलाई सम्मान
राम अवतार चौधरी। कपिलवस्तु,प्रेस चौतारी कपिलवस्तुले जिल्ला भेला तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सोमबार गोरुसिंगेमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा क्रियशिल पत्रकारलाई सम्मान गरिएको छ ।
क्रियाशिल पत्रकारिता नन्दराम पौडेल स्मृति पुरस्कारबाट लामो समयदेखि रेडियो भ्वाइसमा कार्यरत रहेकी सीता बेल्बासे र बुटवल टुडे संवाददाता तथा प्रेस चौतारीका जिल्ला सचिव बाबुराम रायमाझी र नन्दराम पौडेल मरोणापरान्त उनका दाजु टेकराज पौडेललाई प्रतिव्यक्ति रु.१० हजार नगद र सम्मान पत्र सहित सम्मान गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सह इन्चार्ज गिरीधारीलाल न्यौपानेले सकारात्मक कार्यलाई प्रोत्सहन गरि नकारात्मक कार्यलाई खबरदारी गर्नु मिडिया लगायत पत्रकारको प्रमुख भुमिका रहेको बताए । सरकार तथा समाजको अग्र्र पंतिmमा रहेको नागरिक अगुवा लगायत संघसंस्थाले गरेको कामबारे आम नागरिकलाई सुसुचित गर्न सञ्चारमाध्यमले मात्रै हुने सक्ने उनले उल्लेख गरे । विगतका पत्रकारिताको अवस्था स्मरण गर्दै हालको परिस्थिति निकै सहज भएको बताउँदै सामाजिक संजालको कुशल प्रयोग गरेर पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय पत्रकारिता निकै धाराशायी हुदैँ गएको जनाउँदै खोजमूलक पत्रकारितामा विकास गराउन एकदमै महत्वपूर्ण रहेको जनाए । ओली सरकारले ल्याएको विकास निर्माण लगायत समाज परिवर्तन हुने योजना वर्तमान सरकारले खारेज गरेकोप्रति मिडियाकर्मीलाई कलम चलाउन न्यौपानेले आग्रह गरे । निवर्तमान सरकारले गरेको धेरै कार्य जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुति भएको दावी गरे । पार्टी निकट अरु पनि पत्रकार संगठन भए त पनि पत्रकारिता पेशालाई अझ थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रेस चौतारीले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको उनले प्रशंसा गरे ।
यसैबीच शुद्धोधन गाउँपालिका प्रेस सेन्टर कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष रहेका प्रभुनाथ गुप्ताले सेन्टर परित्याग गरि प्रेस चौतारीमा प्रवेश गरेका छन् । उनले सेन्टरमा रहेर कार्य गर्दै गर्दा आफूलाई असुरक्षि महसुुस भएको जानकारी दिए । उनले भने “सत्यताको वकालत गर्नु पत्रकारितको धर्म हो, त्यहि गर्दा सेन्टरको स्विाकार्य नभएकोले यसमा आउनुको विकल्प नरहेको खुलाए” ।
उक्त कार्यक्रम हरि अधिकारीको अध्यक्षता, नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्षता झविलाल पाख्रेल र लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थी, प्रेस चौतारी नेपालकी केन्द्र्रय सदस्य पार्वती पाण्डे, प्रचार विभाग प्रमुख लक्ष्मण बेल्बासे र एमाले लुम्बिनी प्रदेश सदस्य टेकराज पौडेल लगायत जिल्लाका विभिन्न मिडियामा आबद्ध पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
Posted in समाचार, स्थानीयLeaveaComment on प्रेस चौतारीको जिल्ला भेला सम्पन्न, क्रियाशिल पत्रकारलाई सम्मान
कृष्णनगरमा झाडापखालाको प्रकोप
कपिलवस्तु। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा फैलिएको झाडापखालाको प्रकोप पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । गत सोमबार साँझ करिब ५ जनामा देखिएको झाडापखाला क्रमश बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको अस्पतालले जनाएको छ ।
झाडापखाला गाउँभरी नै फैलिएपछि कृष्णनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, ८ र ९ का बासिन्दा बढि प्रभावित हुँदै आएका छन् । झाडापखालाका बिरामी अस्पतालमा ह्वात्तै बढेसँगै शिवराज अस्पतालका डाक्टर मुकेश चौधरी सहितको स्वास्थ्यकर्मी उपचारमा रातदिन खटेका छन् । चेतनाको अभावका कारण सरसफाईमा ध्यान नदिँदा तथा दुषित पानीका कारण झाडापखालाको प्रकोप बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाई छ । उनीहरुले बिरामीको जाँच तथा औषधी उपचार लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिएका छन् भने कतिपय जटिल केशका बिरामी जिल्ला अस्पताल तौलिहवा र बुटवलमा रिफर गरेको अस्पतालका डाक्टर चौधरीले बताए ।
कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ सुखरामपुरका अढाई बर्षीय आयान अली नाँउ झाडापखालाका कारण शिवराज अस्पतालमा भर्ना भए । उनका अभिभावकले ३ दिनदेखि पखाला लागेपछि नाँउलाई शनिबार अस्पताल ल्याएका थिए । अढाई बर्षीय नाँउलाई दिनको ६ पटक पखाला लाग्ने गरेको अभिभावकले बताए । अस्पतालले बिरामी आउना साथ औषधी उपचार गरेको छ ।
यस्तै कृष्णनगर नगरपालिका ८ की ५१ बर्षिय समशुन निशा शुक्रबार २ बजेदेखि पखालाबाट ग्रषित हुँदै भर्ना भइन् । अहिले केही अस्पताल भर्न भए देखि स्वास्थ्यमा सुधार भएको बताइन् । त्यसैगरी कृष्णनगर नगरपालिका–९, बहादुरगंजका ४ बर्षीया रन्जना काश्यपलाई शुक्रबार अस्पताल भर्ना गरियो । दैनिक ५÷६ पटक झाडा पखाला लागेपछि उनका बाबु भरतलाल काश्यपले नजिकै रहेको शिवराज अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गराइरहेका छन् । उनलाई लगातार झाडापखाला सँगै बान्ता पनि आउने गरेकाले अभिभावक चिन्तित छन् । तर अहिले औषधी उपचार पछि बान्ता रोकिएको छ ।
रातदिन औषधी उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी खटिएपछि ५ दिनपछि क्रमश झाडा पखालाका बिरामी कम हुदै गई नियन्त्रणमा आएको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख हेमराज पाण्डेले बताए । आइतबार सम्म शिवराज अस्पतालमा झाडा पखालाका ६ सय ८८ जना बिरामी भर्ना भएकोमा ६ सय ३१ उपचार पछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । ४० जना बुटवल र तौलिहवा अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । झाडापखालाका कारण केहि दिन पहिले उपचारकै क्रममा निजी क्लिनिकमा २ जनाको ज्यान गएको छ ।
झाडा पखालाबाट बालबालिका बढि प्रभावित
झाडापखाला फैलिएको ५ दिनपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या भने क्रमश घटेको छ । शनिबार मात्र झाडा पखालाका बिरामी ६१ जना भर्ना भई उपचार गराइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । आइबार मात्र १७ बिरामी भर्ना भएकोमा ११ जना बालबालिका रहेको पाइएको छ । उनीहरुलाई लगातार झाडा पखाला, ज्वोरो र केहीलाई बान्ता हुने गरेको छ । तर बिरामीको अवस्था सामान्य बन्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ ।
दुषित पानीका कारण झाडापखाला
गत सोमबार देखि कृष्णनगर नगरपालिकामा फैलिएको झाडा पखालाको मुख्य कारण दुषित पानी भएको तथ्य फेला परेको छ । पानीका ४ वटा परिक्षण गरिएको मध्ये टुयुववेलमा र नेपाल खानेपानी संस्थान बहादुरगंजले वितरण गरेको खानेपानीमा दिशाका किटाणु भेटिएको बताइएको छ । संस्थानले वितरण गरेको खानेपानीे सप्लाईको पानीको नमुना परिक्षणमा अत्यधिक व्याक्टेरिया (दिशाका किटाणु) देखिएको थियो । संस्थानले वितरण गरेको पानी नांगो आँखाले हेर्दै फोहोरो र धमिलो पना देखिएको परिक्षणका एक प्राविधिकले जनाए ।
गत बुधबार भुपु सैनिक खानेपानी वाणगंगामा परिक्षण गरिएको नमुनामा एक सय फुट तलको पानीमा शुद्धता देखिएको र ४० फिट बराबरको ट्युववेलमा १०० मिलिलिटर बराबर २ प्रतिशत व्याक्टेरिया देखिएको थियो । भने सप्लाईको धारामा अत्यधिक नगण्य व्याक्टेरिया देखिएको प्राविधिक धन बहादुर सोमैले बताए । त्यस्तैगरी सय फुटको ट्युववेलको नमुना पानी परीक्षणमा कुनै व्याक्टेरिया भेटिएन । खानेपानी संस्थानले वितरण गर्ने क्षेत्रहरु खासगरी कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं. ५, ७, ८ र ९ वडाका बासिन्दा बढि झाडापखालाबाट ग्रसित छन् ।
यता संस्थानले वितरण गरेको पानी शुद्धता भएको विज्ञप्ती जारी गरेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान बहादुरगंजका कार्यालय प्रमुख रमेश मग्रातीको हस्ताक्षर भएको शुक्रबार जारी गरिएको एक विज्ञप्ती मार्फत संस्थानबाट वितरण गरेको सप्लाई क्षेत्रको पानीमा कुनै प्रदुषण र जिवाणु फेला नपरेको दावी गरिएको छ ।
झाडापखाला बिरामीको कोभिड परिक्षण
आइतबार शिवराज अस्पतालमा झाडा पखालाबाट प्रभावित भएका व्यक्तिको कोभिड परिक्षण गरिएको छ । झाडापखालाबाट प्रभावित भई अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको कोभिड परिक्षण गरिएको छ । केही बिरामीमा कोभिडको सामान्य लक्षण देखिएपछि एन्टीजन विधीबाट कोभिड परिक्षण गरिएको अस्पतालका डाक्टर चौधरीले बताए । आइतबार सम्म एन्टिजन विधीबाट ३३ जनाको नमुना संकलन गरिएको मध्ये १ जना महिलामा पोजेटिभ देखिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य विशेषज्ञको टोली
गत साता देखि झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र बहादुरगंजमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ टोली शनिबार आइपुगेको छ । शनिबार दिउसो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत इपिमिडियोलोजी, विश्व स्वास्थ्य संगठन सहितको विशेषज्ञ टोली शिवराज अस्पताल बहादुरगंज पुगेको छ । डाक्टर सहितको विशेषज्ञ टोलीले प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षण, बिरामी भेटघाट, नमुना संकलन लगायतका काम गरेको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु प्रमुख हेमराज पाण्डेले बताए । मन्त्रालयबाट खटिएको ३ जनाको विशेषज्ञको टोलीले पानी र दिशाको नमुना संकलन समेत गरेको छ ।
त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुको टोलीले पनि झाडा पखाला प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत निरिक्षण गरेको छ ।
Posted in समाचार, स्थानीयLeaveaComment on कृष्णनगरमा झाडापखालाको प्रकोप
ठेगाना: शिवराज ५ कपिलवस्तु
© Kapurionline.com 2021 All rights reserved. | Technology Partner: LGM Nepal.